काठमाडौं उपत्यकामा लम्बियो निषेधाज्ञा कहिलेसम्म ? (हेर्नुहोस्) – OnlinePahar
काठमाडौं उपत्यकामा लम्बियो निषेधाज्ञा कहिलेसम्म ? (हेर्नुहोस्)
२८ माघ २०७७, बुधबार १८:०६ Basanta Khanal	0 Comments	lockdown
काठमाडौं : काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा वैशाख २९ गतेसम्म लम्बिएको छ । उपत्यकाका ३ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको मंगलबार बसेको बैठकले निषेधाज्ञा थप गर्ने निर्णय गरेको हो । निषेधाज्ञा लम्ब्याउनुका साथै थप कडाई पनि गरिने भएको छ । अब अत्यावश्यक खाद्य सामग्रीका पसल तथा व्यवसायहरु बिहान ९ बजेसम्म मात्र सञ्चालन गर्न पाइने छ । मास्क नलागाइ हिडेमा एक सय रुपैयाँ जरिवाना तिनुपर्नेछ । उपत्यकाका जिल्ला अधिकारीहरुले वैशाख १६ गतेदेखि निषेधाज्ञा लागू गरेका थिए ।
पछिल्लो समयमा नेपाल-भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरू पनि कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणबाट प्रभावित भएको बताइएको छ।नेपालमा दैनिक परीक्षण गरिनेमध्ये औसतमा ३० प्रतिशतभन्दा बढीमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि हुने गरेकोमा तीमध्ये स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि छन्।भेरी अञ्चल अस्पतालको कोभिड वार्डमा कार्यरत डा. आश्री सिंहलाई पनि कोभिड-१९ पुष्टि भएको छ।तर आफूले “खोप लगाएका कारण लक्षण अरू सङ्क्रमितको भन्दा सामान्य रहेको र निको हुने क्रम पनि तुलनात्मक रूपमा छिटो भएको” उनको अनुभव छ।
← क – क कसको बढ्यो त हेर्नुहोस् , ७ ओटा कम्पनीहरुको शेयर मूल्य उच्च दरले बढ्यो ?
पाथिभरा माताले हामीसबैको रक्षा गरुन, आज – २२ बैशाख २०७८ बुधवारको राशिफल पढौं →
२८ माघ २०७७, बुधबार १६:११ Basanta Khanal	0